Fialan-tsasatra akaikin'i Madrid: tanàna mahafinaritra eto an-drenivohitra. Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, Madrid, Tsangatsangana
Madrid dia mihoatra ny renivohiny, noho izany, manolotra anao izahay fitsangantsanganana akaikin'ny Madrid mba hahafantaranao ny lafiny sariaka amin'ny tanàna Espaniola, lavitra ny fihazakazahana sy ny tabataba mahazatra.
Ny faritany izay mandrafitra ny Community dia manana tontolo voajanahary manintona tandavan-tendrombohitra, lembalemba, fitahirizana ary fitoeran-drano, indraindray manaloka ny fisian'ny tanàna lehibe eo akaiky eo. Na izany aza, Ao amin'ny Community of Madrid dia misy tanàna misy hatsarana be izay nahalala nitahiry ny hatsaran-tarehiny sy ny lovany. Manaraka izany, hitsidika ny dimy amin'izy ireo izahay hanao fitsaharana any akaikin'i Madrid.
5 Rasca mangatsiaka
6 Fialan-tsasatra akaikin'i Madrid
Niampita ny renirano Tagus sy Jarama, ity tanàna akaikin'ny Toledo ity dia manana tontolo voajanahary sy kolontsaina izay azon'ny tanàna Espaniola vitsivitsy. Anisan'ny tena manintona mpizahatany ny Royal Palace, namboarin'ny tarana Australiana sy ny zaridaina Parterre, La Isla na El Príncipe. Ny fitsangatsanganana any Aranjuez dia tokony hisy koa ny fitsidihana ny tranombakoka Faluas, izay misy ireo sambo kanto ampiasain'ny mpanjaka Espaniola hitety ny Reniranon'i Tagus.
Trano hafa misy fahalianana be hitsidika an'i Aranjuez dia ny Casa del Labrador, ny lapa Medinaceli, ny tranon'ny mpivarotra sy ny Knights, ny tranon'ny mpiasa, ny fiangonan'i San Antonio, ny Plaza de Toros, ny Mercado de Abastos na ny Hopitalin'i San Carlos.
Iray kilometatra monja avy eo amin'ny tanàna no misy ny Mar de Ontígola, fitahirizana taloha ho an'ny fialamboly mpanjaka izay fialofana ho an'ny vorona rano ankehitriny, misy làlana ekolojika ary mpandinika eny amoron-dranomasina.
Zara raha misy am-polony ny mponina monina ao amin'io tanàna kely io any an-tendrombohitra Madrid. Patones dia misongadina amin'ny fananganana am-pitandremana ireo tranony takelaka, karazana maritrano mainty izay mampiavaka ny tanàna manodidina, ary koa ao amin'ny faritany manodidina an'i Guadalajara, noho ny habetsahan'ity vatolampy ity ao amin'ilay faritra.
Ny hermitage taloha tamin'ny 1653 dia miasa ho biraon'ny fizahan-tany ary ny tanàna dia manana tranombakoka Pizarra ihany koa, izay manandrana manazava hoe inona ity karazana maritrano ity amin'ny alàlan'ny zoro samihafa any Patones. ny Fanambarana ho fananana tombotsoan'ny kolontsaina no nanome azy fiarovana farany ambony izay mandinika ny lalàna momba ny vakoka ara-tantara Espaniôla, zava-misy iray izay nanampy ny fandraràna ny fidirana amin'ny fiara tsy mataho-tody mankamin'ny tanàna dia mitaky ny fitehirizana ity tambajotra mahafinaritra an'ny lohasaha Jarama ity.
Patones, misaotra ny tontolo voajanahary tsara tarehy, ny maritrano vato sy ny gastr gastric matsiro, Nanjary nahasarika mpizahatany izay tian'ny maro ho fantatra rehefa voalamina ny fitsangantsanganana akaikin'ny Madrid.
Mpizahatany an'arivony isan-taona no tonga ao amin'ity tanàna tsara tarehy ity any an-tendrombohitra Madrid mba hitsangatsangana manodidina azy. Ny fitsidihana an'i San Lorenzo dia tsy maintsy atomboka amin'ny Filohan'ny Felipe II, ao amin'ny ala Herrería, izay ahitàna sary an-tsaina ny masonkoditra manjaka ao amin'ny monasitera miorina eo am-pototry ny Tendrombohitra Abantos.
Aorian'izay dia tsy azo ihodivirana ny fitsidihana ny tsangambaton'ny Herrerian izay natsangan'i Felipe II sy notorontoronina ho monasitera, lapa ary panteon mpanjaka. Vita amin'ny granita, ny fomba fandaminana ny monasiteran'ny dia monja satria an'ohatra dia ny grill nampijaliana an'i San Lorenzo, tamin'ny festival izay ny fandresena tamin'ny ady tao San Quentin dia nitranga tamin'ny 1557.
Ny fitaoman'i El Escorial toy ny fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka Niteraka fananganana kely toy ny Casa de Arriba noforonin'i Juan de Villanueva ho an'ny anaran'ny Infante Gabriel, zanakalahin'i Carlos III de Borbón. Ny tranon'ny Prince dia natsangana tamin'ny baikon'i Carlos IV ihany, fony izy mbola andriana satro-boninahitra. Voahodidin'ny zaridaina manaitra an-jatony taona maro izy io.
Any amin'ny lemaka Tajo-Jarama, 46 kilometatra miala ny renivohitry Madrid, Chinchón dia iray amin'ireo tanàna tsy manam-paharoa sy voatahiry tsara indrindra ao amin'ny Community. Ny arabe dia mitazona izany hatsaram-panahy izay mampatsiahy ny lasa izany ary ny arabe rehetra dia zaraina manodidina ny Ben'ny tanàna Plaza, toerana manodidina ny fiainana ao an-tanàna.
Momba ny Moyen Orient, mihidy ary tsy ara-dalàna, voahodidin'ny tranobe misy rihana telo misy lavarangana hazo antsoina hoe "fanadiovana". Hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, nampiantrano fetibe mpanjaka, fanambarana, paositry ny hatsikana, adin'omby ary natokana ho an'ny sarimihetsika mihitsy aza.
Ny fijanonana ilaina iray hafa dia ny Parador de Chinchón, izay mibodo ny trano fitokanana taloha an'ny Agustinos Calzados, natsangana tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. avy amin'i Andrés de Cabrera sy Beatriz de Bobadilla, amin'ny faritra akaiky ny Ben'ny tanàna Plaza. Ny ankehitriny dia natsangana tamin'ny 1626 ary nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX dia ivon-toerana ho an'ny fanabeazana mahaolona. Taty aoriana dia notsaraina sy nigadra izy mandra-pamerenany tamin'ny laoniny ary lasa Parador tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX.
Na izany aza, manana ny fiangonan'i Nuestra Señora de la Asunción, tanàna mimanda, Casa de la Cadena ary toerana maro hafa ihany koa ny tanàna.
"Chinchón: anis, square ary trano fandraisam-bahiny" hoy ny fitenenana malaza momba ity tanàna ity izay toerana tsara alehan'ny gastronomika koa noho ny anise malaza ary ny divay sy ny fanahiny tsara. Izay trano fandraisam-bahiny ao amin'ny ben'ny tanàna Plaza dia tsara mankafy ny menaka oliva kalitao voalohany, tsaramaso chichoneras, duél ary fatiantoka, migas a la pastora na lasopy Castilian.
Any amin'ny lohasaha tsara tarehy ambony any Lozoya, no misy ny tanànan'i Rascafría, fiaviany medieval. Ny tontolo voajanahariny dia tsara tarehy kanto noho izy manana ny Valan-javaboary Peñalara, ny Giner de los Ríos Arboretum ary ny tobin'i Valdesquí.
Anisan'ireo trano misy marika azy indrindra ny fiangonan'ny paroasy an'i San Andrés Apóstol tamin'ny taonjato faha-XNUMX, La Casona tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay toeram-pitsaboana, ny Sawmill Belgian, ny Casa de Postas taloha, ny Town Town, ny Casa de la Madera ary ny Casa del Guardia avy any Los Batanes. Tsy manadino ny Monasiteran'ny Paular.
Fantatrao ve ny toeran-kafa aleha manao fitsaharana any akaikin'i Madrid ary avelao ny hamafin'ny iainanao eto an-drenivohitra?
Avelao izahay haneho hevitra ary hahitantsika toerana bebe kokoa toa ireo izay arosonay fitsangatsanganana mandritra ny faran'ny herinandro nefa tsy dia lavitra loatra ny renivohitra Espaniola
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Madrid » Fialan-tsasatra akaikin'i Madrid